Zlatan Ibrahimovic oo magacaabay Ronaldo ‘Il Fenomeno’ oo ah ciyaaryahanka ugu fiican abid | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Zlatan Ibrahimovic oo magacaabay Ronaldo ‘Il Fenomeno’ oo ah ciyaaryahanka ugu fiican...
Zlatan Ibrahimovic oo magacaabay Ronaldo ‘Il Fenomeno’ oo ah ciyaaryahanka ugu fiican abid
Zlatan Ibrahimovic ayaa magacaabay Ronaldo ‘Il Fenomeno’ oo ah ciyaaryahanka ugu fiican abid. Wuxuu lahadlay UEFA iyo Discovery + ee Sweden wax ku saabsan xirfadiisa waxaana la weydiiyay shaqsiyan shaqsiyan u doortay GOAT.
“Marwalba waxaan u sheegaa qof walba oo ila ciyaara: Ronaldo waa kubada cagta. In Ronaldo uu yahay kubada cagta, ”ayuu yiri Ibrahimovic, isagoo ula jeeday ciyaaryahanka reer Brazil ee u soo ciyaaray kooxaha Inter, Real Madrid iyo Milan.
Sida uu u dhaqaaqay, sida uu u sameeyay kuwaas tallaabada dheer, orodkaas caajisnimada leh. Aragtidayda, waa ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda, shaki kuma jiro taas. ”
Ibra wax buu ka yiri geesiga kubbadda koleyga LeBron James iyo kuwa kale ee u adeegsada barnaamijkooda inay yihiin xiddigo isboorti si ay ugu dagaallamaan isbeddelka bulshada.
“Waxa uu sameeyo waa wax la yaab leh, laakiin ma jecli marka dadka leh‘ xaalad ’cayiman ay ka hadlaan arrimaha siyaasadda. Samee waxa aad ku fiicantahay. Waxaan ciyaaraa kubada cagta sababtoo ah aniga ayaa ugu fiican. Haddii aan siyaasi ahay, waxaan gali lahaa siyaasadda.
“Tani waa qaladkii ugu horreeyay ee dadka caanka ah ay galaan markay dareemaan inay yimaadeen. Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in laga fogaado arrimahan oo la sameeyo waxa aad ku fiicantahay.
Previous articleSri Lanka oo dib uga laabatay amar muran dhaliyay oo ahaa in la gubo meydadka dhammaan dadkii ku dhintay Covid-19.
Next articleFariin ku socoto Isbitaal Martiini oo xaaladiisa Gar gaar laga deyrinayol
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in dalkiisa uu...
Turkiga ayaa shaaciyay in markii ugu horreysay uu ku howlan yahay in uu soo saaro tallaal looga hortaggayo cudurka Karoona. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip...
Dagaal ka dhacay Degaanka Gaaragoyle oo 15KM u jirta Deegaanka Gadoon...
Wadooyinka Magaalada Muqdisho intooda badan saakay xiran ka dib Maydka Marxuum...